Ọ bụ ihe na undisputed eziokwu na gị iPhone eleghị anya e dere ụfọdụ dị ọmụma bara oké uru. Gị ozi ịntanetị ma onye na-arụ ọrụ yiri pụrụ ịbụ nnọọ mkpa. I nwere ike na-enwe ụfọdụ okwuntughe na nbanye ozi na gị iPhone na ị na-achọghị ịdaba ihe ọjọọ aka. Ọ bụkwa eziokwu na ị pụrụ onwe gị ichekwa ego na bank ozi na gị iPhone na ị na-achọghị onye ọ bụla maara banyere.
Nsogbu bụ na nwere ike ị chọrọ ka tufuo ma ọ bụ na-ere gị ochie iPhone n'ihi na ị chọrọ ịzụ onye ọhụrụ ma ị ma na-enwe obi abụọ banyere nke a ọmụma na-n'ime ihe ọjọọ aka. Ya mere, i kwesịrị a ngwá ọrụ nke ga-ekwe ka ị na-adịgide adịgide ihichapu a data site na ekwentị gị.
Part 1. Otu click ka ihichapụ ihe niile na gị iPhone
Ndị kasị dị irè ngwá ọrụ na-pụrụ inyere gị aka ime nke a bụ Wondershare SafeEraser. Ebe a bụ ihe mere SafeEraser dị nnọọ irè.
Olee ka ihichapụ ihe niile na gị iPhone iji Wondershare SafeEraser
Soro ndị a dị mfe nzọụkwụ ka kpamkpam ihichapu niile data gị iPhone.
Nzọụkwụ otu: download na wụnye Wondershare SafeEraser na kọmputa gị. Na-agba ọsọ usoro ihe omume na mgbe ahụ jikọọ gị iPhone gị na kọmputa na iji eriri cables. Ị kwesịrị ị na-ahụ nke a bụ isi window.
Nzọụkwụ Abụọ: Pịa na "ihichapu niile Data" na nke a bụ isi window.
Nzọụkwụ atọ: ị ga-achọrọ ịbanye okwu "Hichapụ" iji gosi na ị chọrọ niile gị data ehichapu ya.
Nzọụkwụ anọ: Gbaa mbọ hụ na ngwaọrụ gị na jikọọ na kọmputa gị site na dum usoro iji hụ arụmọrụ.
Nzọụkwụ ise: Ozugbo usoro bụ zuru ezu ị ga-ahụ ndị na-esonụ window.
Part 2. Common ụzọ na ndị mmadụ na ihichapụ ihe niile na iPhone
E nwere ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ iji ihichapu niile data gị iPhone ezie na ha nwere ike ghara ịbụ ka dị irè ka iji Wondershare SafeEraser. Ebe a bụ otu n'ime ụzọ ndị a.
Nzọụkwụ otu: Gaa na Ntọala ngwa gị iPhone na mgbe ahụ enweta na General.
Nzọụkwụ Abụọ: Pịgharịa na ala ịchọta "Tọgharia" na enweta na ya.
Nzọụkwụ atọ: mgbe ahụ enweta on "ihichapu niile ọdịnaya na Ntọala."
Nzọụkwụ anọ: Enweta na "ihichapu iPhone" ke nke pụrụ ịkpata window. Ị ga-mkpa enweta na "ihichapu iPhone" ugboro abụọ iji gosi na nke a bụ ihe ị chọrọ ime.
Nzọụkwụ ise: Ị nwere ike a chọrọ ịbanye gị ngafe koodu. Nke a bụ ka n'ihu gosi na ị chọrọ ihichapu niile gị data.
Nzọụkwụ isii: ikpeazụ nzọụkwụ bụ ịbanye gị Apple ID Paswọdu wepụ gị iPhone si "Chọta m ekwentị" ma gbanyụọ "Rụọ ọrụ mkpọchi."
Ozugbo a mere, gị iPhone ga-kpamkpam ehichapu na ị na-free na-ere ya ma ọ bụ na-enye ya onye ọzọ. Nanị nsogbu na usoro a bụ na anyị na-apụghị ekwe nkwa na ọ ga-eme ka n'aka gị data bụ kpam kpam unrecoverable. O nwere ike ya mere na-kasị mma nhọrọ ma ọ bụrụ na ị chọrọ na-ere gị iPhone. Na-ere gị iPhone, hụ na ehichapụ data bụ unrecoverable.
> Resource> iPhone> Olee otú iji Hichapụ Ihe niile na iPhone